အရမ်းတန်ပြီး ဈေးလဲချို၊ ပစ္စည်းလဲကောင်းတဲ့ Xiaomi Redmi 9A ဖုန်းလေးတွေ ~ The ICT.com.mm Blog
အရမ်းတန်ပြီး ဈေးလဲချို၊ ပစ္စည်းလဲကောင်းတဲ့ Xiaomi Redmi 9A ဖုန်းလေးတွေ
အရမ်းတန်ပြီး ဈေးလဲချို၊ ပစ္စည်းလဲကောင်းတဲ့ Xiaomi Redmi 9A ဖုန်းလေးတွေကို ICT.com.mm မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ..
လူကြိုက်များပြီး ပစ္စည်းအကန့်အသတ်ရှိလို့ မြန်မြန်သာဝယ်ထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်..
Display Size: 6.53″ ဆိုတော့ အားရပါးရ ဖုန်းအကြိုက် မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်နဲ့ ကြည့်လို့ရပါပြီ။ နောက်ပြီး Memory (2GB/32GB) နဲ့ (4GB/128GB) ဆိုပြီး ၂မျိုး‌ရွေးဝယ်နိုင်ပါတယ်။ အရောင်လေးက Carbon Gray လေးပါနော်.. ပြီးတော့ 2GB/32GB က China နဲ့ Global ဆိုပြီး ရွေးနိုင်သေးတာဆိုတော့..
Newer Gamer တွေအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် XPG Gaming RAM တွေ
Older Wide Angle နဲ့ Conference Camera ကောင်းကောင်းလေးကိုရှာနေရင်တော့ Telycam Professional Full HD Wide Angle Conference Camera